Ikhalenda yeLunar yeenwele ezinqabileyo ezintle kwiDisemba 2015. Iintsuku ezithandekayo zokunciphisa izinwele.
A ngaziwa Ngeenkwenkwezi
Ikhalenda yeLunar yeenwele zezinwele zikaDisemba 2015
Kulilungele nini ukufumana izinwele ngoDisemba 2015? Iingcebiso kunye neengcebiso
Ukugcina intloko enempilo kunye nokulungiswa kakuhle kweenwele, gcina iinwele zakho zinqumle umlo owufunayo ixesha elide ngangokunokwenzeka, kunye nokuphephelela ubuninzi beengxaki ezinxulumene nokungonakaliswa kweengqungquthela, kuyacetyiswa ukuba uqaphele isigaba apho inyanga ifike ngexesha lokutyelela kweebhokhwe. Ukuba uya ku-salon ngenyanga yokuqala ebusika, ixesha elifanelekileyo kakhulu liya kukunceda ukhethe ikhalenda yethu yenyanga, ebonisa imihla ephumelele kakhulu ukuzaliseka kwalo msebenzi kule nyanga yokugqibela yalo nyaka.
Iintsuku ezininzi kakhulu ezinenhlanhla zokukhanda izinwele
Disemba 1 - inkwenkwezi yasebusuku iqala ukwanda kwaye i-Aries. Eli xesha alinakulungele ukunqunyulwa kweenwele, kuba baya kuba neengxaki nakwizandla zenkosi elungileyo. Kodwa kulolu suku unako ukupenda iipendle ngokukhuselekileyo, ngokukodwa, iipende ngokwemvelo - i-henna okanye i-basma.
Ukuba unqwenela ukuya kumntu wezinwele ngomhla kaDisemba 7, ke uqwalasele ukuba kwikholenda yenyanga namhlanje akudingekile ukuba unqunyulwe iinwele okanye wenze ezinye iindlela zokubambisa i-salon, ngaphandle koko baya kulahlekelwa ukukhanya kwabo kunye nokubonakala kakuhle.
Izinombolo ezingu-8 ukuya ku-9 - iNyanga eyanciphayo kwiCarcer ithembisa ukukhula kancinci kwentloko yeenwele, ngoko kungcono ukunqunyulwa kweenwele kumhla ohlukileyo, kwaye akudingekile ukuba utshintshe umbala weentloko, kuba ngelo xesha iinwele zibuhlungu.
Ukususela ngoDisemba 15 ukuya ku-16, iNyanga iyaqhubeka ihamba, kodwa isele iLibra. Ngokwekhalenda yenyanga yezinwele zeDisemba, le mihla kungcono ukuyeka ukuvakashela i-salon yobuhle.
NgoDisemba 22 kuza inyanga entsha eKapricorn kwaye oku kuchaphazela kakubi umzimba womntu ngokubanzi. Ngoko ke, ukuba kukho elo thuba, ukutyelela kwi-salon kunconywa ukuba kuhlehliswe.
Ukususela ngomhla wama-23, inyanga iqala ukukhula kwiCapricorn, isengenayo inxaxheba ekusebenziseni iinwele.
Ngomhla wama-24 ukuya ku-25 kuDisemba kufuneka ilahlwe kumbala okanye ukusika izinwele, ngaphandle koko impilo yakho ingaba nzima.
Iintsuku eziphumelele kakhulu kwi-hairstyle
NgoDisemba 2 - imini ayithwali umthwalo wamandla kakhulu - ngoko ukutyelela i-hairdresser ayikwazi ukuhlehliselwa kude kube yimva.
3 - 4 inyanga ekhulayo iTaurus, ngoko uya kuba nethamsanqa kuyo nayiphi na imizamo. Ngoko unokuzicwangcisa ngokukhuselekileyo ukucoca i-curls okanye umbala walo mhla.
Ngomhla kaDisemba 5, inyanga idlula ibe ngumqondiso weGemini, kwaye i-6 iza inyanga epheleleyo kulo mqondiso. Iintsuku zibhekwa zingafanelekanga ukunciphisa ubude okanye ukukhetha i-hairstyle entsha.
Ngexesha likaDisemba 10 ukuya ku-11, unokuzama ukunyusa iinwele kunye nomthunzi.
NgoDisemba 12 ukuya ku-14-inyanga yokuqhaqhazela kwiVirgo ithembisa iintsuku ezilungileyo kakhulu ukutyelela umnwele: iinwele ziya kuzuza umthamo, ziya kubonakala ziphilile kwaye zilungele kakuhle. Imimiselo yembala kumbala ayinayo - ukhululekile ukukhetha nayiphi na into yakho kwaye uyamangalisa wonke umntu onomfanekiso omtsha.
Ukuba uthatha isigqibo sokutshintsha i-hairstyle yakho ngomhla we-17-inyanga yokunyusa kwi-Scorpio ibonisa usuku olungathathi hlangothi, kodwa akufanelekile ukusika okanye udaye iinwele zakho ngo-Disemba 18, ngakumbi ukuba ucinga ukuba awukwazi ukuzithoba ngokwemibala, umzekelo izisombululo kunye nokupakisha.
NgoDisemba 20, 2015 luyimini enhle kakhulu yokulinga kunye nobude bezinwele, kodwa 21 - akukhuthazwa ukuba uthinte iinwele.
NgoDisemba 26, inyanga ifaka uphawu lwePisces - kuyinqwenela ukuba nexesha lokusika iinwele zakho namhlanje, kuba linika inkokhelo enamandla yamandla, angenakutsholwa malunga nexesha ukususela ngoDisemba 27 ukuya kuDisemba 29, xa inyanga ekhulayo e-Aries ingenakucebisa ukuba uye kwi-hairdresser.
Ngomhla wama-30 ukuya ku-31 kuphakanyiswa ukuba uhlawule ukutyelela inkosi yakhe, njengoko le mihla ingenye yeyona ndlela ifanelekileyo yokumisa okuzinzile, iinwele ezimnandi kunye neenwele ezintsha ezintle zeenwele zakho.
Abanye abantu abanokungathembeki bacinga ukuba le ndlela yokwenza iinqununu ingathandabuzeki, kodwa amava kwabesetyhini abafuna ukukhula iinwele abonisa okuchaseneyo. Ngokuqinisekileyo, nokuba okanye ukulandela ikhalenda yenyanga yinto ebalulekileyo kumntu wonke, kodwa nakubani na, ukuthobela le miyalelo elula, wena kunye nelokhi yakho ngeke kube nzima.
Ikhalenda yeLunar kunye nothando
Ibhinqa le-Aries, indoda ye-Aries: i-horoscope iyahambelana
Wazalelwa ngonyaka ophelileyo
Kulunge nini ukufumana izinwele ngoNovemba 2015?
Ukuthenga ngeentlobo zeentlobo ze-horoscope
Yisiphi isikhwama esilandelayo ngokwempawu yeZodiac?
Unyaka wezilwanyana ngo-2016: ikhumba leMlilo elisebenzayo nelithembisayo
Ukuvuvukala phantsi kwamehlo omntwana
IiVithamini yonke imihla yabasetyhini
Iimpawu kunye nokunyangwa kwe-impetigo kubantwana
ISatifikethi sokukhula: i-wardrobe yowesifazane emva kweminyaka engama-30 ubudala
Ubumnandi obude: Indlela yokukhetha umtshato womtshato ngesitimela
Isaladi yenkukhu yaseJamaican
Ziziphi iimfashane ezichaphazela impilo yabantu
Indlela yokuseka ubudlelwane nomyeni wakhe ecaleni lomtshato
Ufuna ukwazi ngokwakho, ukudansa imidanso yaseMpumalanga
I-Tree Tree Oil yeenwele: IiNzuzo kunye neMigqaliselo yaseKhaya
Izizathu zokwenza umsebenzi
I-cottage ushizi casserole kunye nama-strawberries
Iindlela eziphambili zokulwa neselula
Indlela yokubhalisa i-ICQ kwifowuni yakho?
Indlela yokuhlalisa umntwana
Ukuvuvukala kweentlobo - iimpawu, unyango